कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला भन्छिन : प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणको सत्यतत्थ्य बाहिर आउनुपर्छ – BP Ideology National Society
You are here: Home / news / कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला भन्छिन : प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणको सत्यतत्थ्य बाहिर आउनुपर...
कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला भन्छिन : प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणको सत्यतत्थ्य बाहिर आउनुपर्छ
२३ फागुन,काठमाडौैँ÷ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले नेपालमा कोरोना भाइरस जसरी नै भ्रष्टाचार मौलाएको दाबी गर्नुभएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले नेपालमा कोरोनाले तर्साएको जस्तै भ्रष्टाचारले पनि तर्साएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै दृढ इच्छाशक्तिका कारण प्रधानमन्त्रीले शारीरीक रोग जित्न सफल भएको तर, भ्रष्टाचारलाई जित्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भन्दै उहाँले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउनुभयो । पुर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई कारबाही हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
March 6, 2020 /by bp bichar
http://bpins.org.np/wp-content/uploads/2018/07/logo.png00 bp bichar http://bpins.org.np/wp-content/uploads/2018/07/logo.png bp bichar2020-03-06 07:17:052020-05-02 07:16:37कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला भन्छिन : प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणको सत्यतत्थ्य बाहिर आउनुपर्छ
कोरोना भाइरसको कहर : सरकारको तयारी... कोरोना सन्त्रास ः नेविसंघद्धारा...